राष्ट्रपतिमा पुन विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित
काठमाडौं, २९ फागुन । विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ । आज भएको मतदानमा २९ हजार २ सय ७५ मतभार सहित भण्डारी विजयी
राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान जारी
काठमाडाैं । संसदले मंगलबार नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्दैछ। राष्ट्रपतिका लागि वाम गठवन्धनले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले कुमारी लक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार बनाएको
त्रिभुबन बिमानस्थलमा हिजो बिमान दुर्घटना हुनुपुर्व केहि मिनेट अघि पाइलट र बिमान बिच यस्तो कुराकानी भएको थियो(कुराकानीको अडियो)
काठमाडौं । फागुन २९ । त्रिभुबन बिमान स्थलमा हिजो भएको बंगलादेशी बिमान दुर्घटना अघि बिमानस्थल र पाइलट बिच भएको कुराकानीको अडियो सार्वजनीक भएको छ । अडियोमा
पृथ्वीनारायण शाह र गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहका पालामा दुई पटक नेपालको राजधानी बनिसकेको नुवाकोटलाई प्रदेश नं ३ को राजधानी बनाउने ऐतिहासिक, भौगोलिक, रणनीतिक आधार
काठमाडौँ, २९ फागुन नुवाकोटलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन नुृवाकोटका प्रदेश सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, राजनीतिक दल र पर्यटन व्यवसायी र नागरिक समाजले ऐतिहासिक, भौगोलिक, रणनीतिक र पूर्वाधारका
Date : 12 Mar 2018
बंगलादेशी जहाज दुर्घटनाको कारणबारे यसो भन्छ त्रिभुबन बिमान स्थल कार्यालय
काठमाडौं । फागुन २८ । त्रिभुबन बिमान स्थलमा आज दिँउसो भएको जहाज दुर्घटनामा परी ५० यात्रुले ज्यान गुमाएका छन् । बंगलादेशबाट काठमाडौंका लागि उडेको बिमान त्रिभुबन
त्रिभुबन बिमानस्थल जहाज दुर्घटनामा ५० को मृत्यु, जहाजमा को को थिए ? (नामावली सहित)
काठमाडौं । फागुन २८ । त्रिभुबन बिमानस्थलमा आज दिँउसो भएको बिमान दुर्घटनामा परी ५० जनाको ज्यान गएको पुष्टी भएको छ । बिमान दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्रुको
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बङ्गलाको विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना २५ को मृत्यु, १७ को उद्धार
काठमाडौं । फागुन २८ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा अवतरणका क्रममा यु एस बंगला ७३८ विमान अाज दिउँसो ढाका वाट काठमाडौ अाउंदा अवतरणकाे क्रममा (७२ सिटे विमान) ७१
फोरमबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । फागुन २८ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघीय सरकारमा जाने बातावरण बन्न लागेपछि पार्टीभित्र मन्त्री बन्नेको रस्साकस्सी सुरु भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित
६ महिनामा ३५ सय बजार अनुगमन, एक जना दोसी पनि कारबाहीमा परेनन, साझेदारीको नाममा झोले संस्थालाई समेत लाखौं बाँडीयो
काठमाडौं । फागुन २८ । सरकारी अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत साउनदेखि पुस महिना सम्ममा ३५ सय बढी बजार अनुगमन गरेपनि
राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड- नेपाल युवकमा
अशोक तिवारी।काठमाण्डौ। "स्वास्थ्यको लागी खेलकुद, राष्ट्रको लागी खेलकुद" भन्ने मूल नाराको साथ काठमाडौं क्षेत्र नं ७ ले आयोजना गरेको दशौ राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड २०७४ कामपा १६
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठबाट कृष्णमोहन स्मृति खुुल्ला व्याडमिन्टन, सहवीर स्मृति खुल्ला लनटेनिस र राष्ट्रिय खुुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन
काठमाडौं, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल केन्द्रिय खेलकुद समितिको आयोजनामा संचालन हुने ‘चौधौं राष्ट्रव्यापी कृष्ण मोहन स्मृति खुुल्ला व्याडमिन्टन प्रतियोगिता–२०७४’, ‘दशौं
काठमाडौं । फागुन २७ ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कैलाली घटनाका बलात्कारीलाई सिधै कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । संसदमा बोल्दै आइतबार प्रचण्डले अब यति बलियो सरकार बनिसकेपछि
नुवाकोटमा टिफरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा मोटरसाइकल चालक एक युवकको घटना स्थलमै मृत्यु
काठमाडौं । फागुन २७ । नुवाकोटमा टिफरको ठक्करबाट एक युवकको ज्यान गएको छ । टिफरको ठक्करबाट मृत्यु हुनेमा नुवाकोटको बहुवाका तिलक मिजारको घटना स्थलमानै मृत्यु भएको प्रत्यक्ष
आपुर्ती मन्त्री मातृका यादबद्धारा अनुगमनमा जाने कर्मचारीको पछिल्ला १० वर्षयताको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने निर्णय
काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले अनुगमनमा जाने कर्मचारीको पछिल्ला १० वर्षयताको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने निर्णय गरेका छन्। अनुगमनमा जाने कर्मचारीले बार्गेनिङ
ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने, सोच्दै नसोचिएको दलको समेत ओली सरकारलाई समर्थन ?
काठमाडौं । फागुन २७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा बाट आज विश्वासको मत लिदै छ । दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभामा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले
Date : 10 Mar 2018
पत्रकारलेनै सुसाइड नोट लेखेर गरे आत्महत्या, आत्महत्याको कारण सुन्दा तपाँईको आँखाबाट आँसु झर्ने छ
काठमाडौं । फागुन २६ । राज्यको चौथो अंग भनेर भन्ने गरिएपनि पत्रकारका निम्ती राज्यका तिनवटा निकायले पाउने जस्तो कुनै तलब सुविधा पत्रकारले पाँउदैन् । कार्यपालीका, न्यायपालीका
राजविराज बजारमा भिषण आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति
काठमाडौं । फागुन २६ । शनिबार बिहान राजविराज बजारमा भिषण आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति भएको छ । राजविराज नगरपालिका–७ हटियाका जुत्ता, चप्पल व्यवसायी नौसाद खातुनको पसलमा बिहान
तपाँईको दिमाख कतिको खतरा छ सहि जबाफ लेख्नुहोस, यो हिसाबको सहि उत्तर थोरैको मात्र मिल्छ, भित्र क्लिक नगरी उत्तर लेख्नुहोस यसको सहि उत्तर हो ७५
शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाण्डौं नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, अष्ट्रेलियन राजदुतावास, यू.एन.डी.पी. र सञ्चारिका समुहको आयोजनामा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको न्यायमा पहुँच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको
बजार अनुगमन टोलीकै भुमिकाको बारेमा मन्त्रीलाई उजुरी ! यस कारण रोकियो बजार अनुगमन, थप कार्ययोजना पछि मात्र अनुगमन थाल्न निर्देशन
काठमाडौं । फागुन २६ । बजार अनुगमनको नाममा अराजकता र बेथीति बढन थालेपछि आपुर्ती मन्त्री मातृका यादबले बजार अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएका छन् । बजार अनुगमनको
किन बढिराछ सम्बन्ध विच्छेद ? यस्ता छन् मुख्य ७ कारण
काठमाडौं,फागुन २६ : झापाकी कुमारी सुनार (नाम परिवर्तन) को १७ बर्षको उमेरमा बिहे भयो । पारिवारीक खटपटका कारण केटाले केही समयमै छोड्यो । माइतै बसेर ११
पार्किङ स्थलबाट स्कुटर चोरी गरीरहेका तिन जना चोरहरु यसरी पक्राउ परे, तिन वटा स्कुटर बरामद
काठमाडौँ, २५ फागुन । पार्किङ स्थलहरुमा राखेको स्कुटरहरुमा नक्कली साँचो प्रयोग गरी स्कुटर चोरी गर्ने ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काभ्रे धुलिखेल नगरपालिका–५
समाजसेवी तथा व्यवसायी लक्ष्य गुरुङले कन्जर्भेटिभ पार्टीको तर्फबाट काउन्सिलर पदको उम्मेदवार
काठमाडौं । फागुन २५ । भूतपूर्व गोर्खा समुदायका एकजना समाजसेवी तथा व्यवसायी लक्ष्य गुरुङले कन्जर्भेटिभ पार्टीको तर्फबाट काउन्सिलर पदको उम्मेदवारका रुपमा आफ्नो चुनावी अभियान शुरु गरेका छन्
बुढीगन्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित २२ सय ३३ जनालाई मुआब्जा (पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ)वितरण
काठमाडौं । फागुन २५ ।सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगन्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित २२ सय ३३ जनालाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । बुढीगन्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यदलले धादिङको खरी,
जापानी युवतीलाई यौनजन्य अपराध गरेको अभियोगमा जापान प्रहरीद्धारा एक नेपाली युवाक पक्राउ
टोकियो– ३० बर्षिय एक जापानी युवतीलाई यौनजन्य अपराध गरेको अभियोगमा जापान प्रहरीले एक नेपाली युवालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जापानमै सेन्मोन स्कुल पढ्दै गरेका
Pages 442 : You are at page 333 of 442